(SAWIRRO) Weriyayaal iyo shacab ku waxyeeloobay Qarax ismiidaamin ah ah oo ka dhacay Baladweyne. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Weriyayaal iyo shacab ku waxyeeloobay Qarax ismiidaamin ah ah oo ka dhacay Baladweyne.
Qof simiidaamiye ah oo xirnaa walxaha qarxa ayaa beegsaday maqaaxi inta badan dadka shacab ah ay fariistaan oo ku dhaw xarunta maamulka gobolka Hiiraan.
Ismiidaamiyahaan ayaa inta uusan is qarxin la sheegay inuu soo taagay ilinka hore ee maqaaxida oo xilligaas ay fadhiyeen dad aan tiro badneyn, waxaana mar kaliya laga war helay jugta qaraxa oo si weyn looga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne.
Ilaa hadda waxaa la xaqiijinayaa dhimashada Saddex ruux oo uu ka mid yahay qofkii geystay weerarka ismiidaaminta ah. Weli qeybo ka mid ah jirkiisa lagu arkayo halka uu qaraxu ka dhacay.
Dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jira saddex wariye ah oo u shaqeynayay warbaahinada kala kala ah Jubbaland, Saab iyo RTN, waxaana la sheegay in wariyaha dhaawac culus uu soo gaaray wariyaha C/llaahi Cismaan Macalin oo ka tirsan TV Jubbaland.